( စကတငဘ – ၁၇ ၂၀၁၈ ) စပ – Вершина Евереста
( စကတငဘ – ၁၇ ၂၀၁၈ ) စပ
( စကတငဘ – ၁၇ ၂၀၁၈ ) စပ တကဖန မနခတ တရပပညတငပငဖတက ကနတငပငသ့ ၀ငရက အပ တနလန့တင အနကဖကသ့ ဆကလကရ့လ
တငတရပပငလယမ အနကဖကသ့ ဥတညလသ စပတကဖန မနခတ သည ဟငကငင တရတနငငတငပင မသညထနစ ရသနစခပ အဓကသယ ယပ့ဆငရ၀နဆငမ့မ ပတတကက သနငခသ လအမက ဘလတရသ့ ရ့ပငပရခငဖင မနတငကြင ထခကဆရမ့မဖစစခကြင တရတမလ၀သဗရက ပကြသညဟ Reuters က ယန့ရသသည
လကရဆယစစ အငအအပငထနဆ တစနရ ၁၂၄ မင လတကနဖင တငတရတပငလယအ မနတငဖတကစဥ ဖလစပငမကပင လ ၅၀ သဆ ကငကငင မကအတ့တင မပမ့မဖစပ်ါခရသလည ယန့ ( တနလ န့ ) တင ဘဏ္ဍရင အခအရကြ ရ၀နဆငမ့မ ပမနအတင ဆကလကဆငရကနပဖစ သည
ဟငကငင မကအတင ဆရသရကြရလမ့မဖစပခပ လလဆယ ပကစသဆ သတငမ အတအကမသရသခ တရတနငငပင China Central Television ကမ လဥရ သန ၁၀၀ ကနထငရ ဂမဒငပညနယတင သဆသ ၂-ဥ ရပဖစသညဟ သတငထတလငခသည
ဂမဒငင ဆကစပလက ဂငဇပညနယတင မစ ၃၈ စင ရကြရလမည သတပခကမထတပနထသည ကမခတစလက မလ၀သစငကြညရစခန ၁၂-ခက ထက ရလငသတငပခကမ ပပ့ထပ လယမ ၁၃,၃၀၀ ဟတတ ပကစဆရကြင သရရသည
ဂမဒငပညနယတင တနဂန့ ညပင ဒသခ လဥရ ၂.၄၅ သနက ဘလတရသ့ ရ့ပငပခရကြင တရပနငငပင ဆငဟသတငဌနက ကြညသည
တရတမလ၀သအဆအရ စပတကဖန မနခတ သည ယန့ တနလန့ ( မနမစတခန ) ၀၄၃၀ ခန့တင တစနရလင မင ၁၀၀ လတကနဖင ၀ငရကခပနက အပပငမနတင အဖစ အပသပဖစကြင ထမတစဆင အနကဖက ဂငဇင ယနနပညနယမသ့ ဆကလက ရ့လသလမမညဟ ခန့မနထသည
(( မနတငတ့ သဘ၀မ မညမပင ပငထနအငအကငသလည ကနတငပငသ့ ၀ငရကလလင အပ ပကပယသမဖစပသည ရင့မရရခငင ဖတသနရ မမကပင အဆကအအ တငတန ကနမငစသညတ့က ဖတသနသညအခ မလလတကနနထက အလနအမငလကပ လပလငမဖစက ကြလအပလင နကဆပကပသမဖစပသည ယခအတငဆလင မနမနငငအထကပငတင စပ တကဖန မနခတ တစဖစလ လပလငမကြင မသညထနစ ရသနနင ဖယရပသည သကဆငရ မလ၀သဌန သတငထတပနခကမက အလထ သသပခငသ အမနကနဆဖစပသည သတငဘသပနသ ))
SEPTEMBER 17, 2018 / 7:21 AM / UPDATED AN HOUR AGO
Super typhoon Mangkhut, with hurricane-force winds well over 200 kilometers per hour (124 miles It then skirted south of Hong Kong and the neighboring gambling hub of Macau, before making landfall in China.
Parts of Hong Kong and Macau were severely flooded, though there were no immediate reports of fatalities. China Central Television, the state broadcaster, said four people had been killed in Guangdong, Chinas most populous province of over 100 million residents.
3 thoughts on “( စကတငဘ – ၁၇ ၂၀၁၈ ) စပ”
Sai Mg says:
Nt Kyi says:
Oung Htay says:
Sai, (( မနတငတ့ သဘ၀မ မညမပင ပငထနအငအကငသလည ကနတငပငသ့ ၀ငရကလလင အပ ပကပယသမဖစပသည ရင့မရရခငင ဖတသနရ မမကပင အဆကအအ တငတန ကနမငစသညတ့က ဖတသနသညအခ မလလတကနနထက အလနအမငလကပ လပလငမဖစက ကြလအပလင နကဆပကပသမဖစပသည ယခအတငဆလင မနမနငငအထကပငတင စပ တကဖန မနခတ တစဖစလ လပလငမကြင မသညထနစ ရသနနင ဖယရပသည သကဆငရ မလ၀သဌန သတငထတပနခကမက အလထ သသပခငသ အမနကနဆဖစပသည ))